Dear Angel(10)….. - ခဈြသောအိနျဂယျြ....., ကိုယျရောကျလာတိုငျး ရငျဖှငျ့စရာတဈခုခု မကနြေပျခကျြတဈခုခု ဒါမှမဟုတျ ဝမျးနညျးစိတျမကောငျးစရာတှကေိုသယျဆောငျလာတော့မယျဆိုတာကို မငျးအ...
How to Sell Your House Without Any Costs or Repairs in Colorado Springs - You’ve decided to sell your house! How exciting! You may have already started spending the profits in your imagination. Until the reality of the costs and ...
RISE 2: Considerations of saltwater, fish, mangroves & people, oil & plastic - From remote Torres Strait to mega-cities like Jakarta, enforced climate refugee status continues to increase. The post RISE 2: Considerations of saltwate...
My Grandmother, Khin Myo Chit and her short story, 'The Four Puppets' - (Illustrated by U Ba Kyi.) Here, this video was talking about my grandmother's (daw) Khin Myo Chit,awriter and journalist and her short story, 'The Fo...
Longing: A Poem about Burma's Upcountry by Ma Nwe - "Surviving" by Nyan Kyal Say, licensed from NK Artbox Shop *A Nya* (အညာ) isareference toaplace, both physical and mythical. Geographically, it refers...
Introducing Junior Win Channel - ၈ြူနီယာဝ◌ငျး ခယျြနယျနဲ့ မိတျဆကျပေးပါမယျ။ My Channel; အောကျက လငျ့ကို နိတျလိုကျရငျ ရောကျပါမယျ။ https://www.youtube.com/channel/UCnl2irzuH8eA5gZxH6h13Ow...
တနှစ် ဆိုတာ ဘာမှ မကြာလိုက်ဘူး ။ အခုလို စိန်ပန်းပြာတွေ ပွင့် နေတဲ့ နွေဦး ရက် တရက် မှာ ၊ တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ် ရှိလှတဲ့ သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်လေး ဆီ ၊ လူအသစ် တယောက် ရောက်လာခဲ့ တာ ။ ကောင်းကင်ကြီးကလည်း ပြာ ၊ အရာရာ ဟာ အပြာရောင် တွေ နဲ့ လွှမ်း နေ ခဲ့တယ် ။ ဆေးရုံကနေ အိမ်ကို ပြန်တဲ့ လမ်းမှာ ၊ အဖြူပေါ် မှာ အပြာရောင် အလုံးလေးတွေ ပါတဲ့ အကျီ င်္လေး ကို ၀တ်ထားတဲ့ လူအသစ် ကလေး ဟာ စောင်အပြာရောင် လေး အောက်မှာ အိပ်ပြီး လိုက်လာ လိုက်တာ ၊ ဘာဆို ဘာကိုမျှ သိလည်း မသိ ၊ မြင်လည်း မမြင် ရှာသေးဘူး ။ အဲ့ဒီနေ့က အပြာရောင် ကဒ်ပြားတွေ အပြာရောင် ပူဖောင်း တွေ ၊ အပြာရောင် ပန်းစည်း တွေ ကြားထဲ မှာ မှ ၊ သဘာဝ က ပေးတဲ့ လက်ဆောင် ၊ စိန်ပန်းပြာ တွေ ကတော့ အလှဆုံးကို ၊ ပွင့်နေ ခဲ့ ကြတယ် လေ။
လေရူး ကြောင့် တရှဲရှဲ မြည်နေတဲ့ သစ်ပင်တွေကို ၊ မုန့်လေးက တွန်းလှည်းလေး ထဲကနေ မျက်နှာလေး မော့ပြီး ကြည့် တယ်။ သူ့ အတွေးသေးသေး ပိစိလေး ထဲမှာ ဘာတွေများ တွေးနေ လေ မလဲ ။ တွန်းလှည်း ကို တွန်း နေ တဲ့ မိုးမိုး ကတော့ အတွေး အကြီးကြီး ကို ချဲ့ ချင် တိုင်း ချဲ့ လို့ ပေါ့ ။ တစက္ကန့် ရဲ့ အပုံလေး တခု အတွင်းထဲ မှာ ကို ၊ ဟိုး မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း ကြီးကနေ ၊ လမ်းဘေးမှာ ကြွေကျ နေတဲ့ စိန်ပန်းပြာ ပွင့်လေး ဆီ လည်း ရောက်ချင် ရောက်သွား ပြန် တယ် ။ အရင်တုန်းက ဆို ၊ တယောက်တည်း လမ်းလျှောက် ထွက်ရင်း ၊ အတွေးထဲမှာ စာတွေ ရေး တယ် ။ အခုတော့ ခါ ၊ ပုခက်ထဲ လည်း စကားပြောပါ ၊ ရေချိုးပေးလည်း စကားပြောပါ ၊ ဆို တဲ့ ကလေးပြုစုရေး ပညာပေး တွေ ဖတ်ပြီး ၊ လမ်းလျှောက်ရင်း ပါ စကားတွေ ပြောပေး နေရတော့ ၊ အတွေးထဲက ရေးလက်စ တွေ လည်း ကစင့် ကလျားပါပဲ ။
ဖတ်လက်စ တွေ၊ လုပ်လက်စ တွေ ။ တကယ့်ကို ဘာကိုမှ လက်စ သတ် မရ နိုင်သေး တဲ့ နေ့ရက် တွေ ပေါ့ ။ ကလေး တယောက်ဟာ ဘယ်အရွယ် မှာ သူ့ကိုယ်သူ သီးခြား လူတယောက်ဆိုတာ သိလာ တယ် ၊ ဘယ် အရွယ်မှာ စကားလုံး တွေကို တွဲသိလာတယ် ၊ ဘယ်အရွယ်မှာ မိဘ ကို ကပ် လာတယ် စသဖြင့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မူ ဇယား တွေ နဲ့ တိုက်ဖတ် ရင်း ၊ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှတဲ့ စာပေ အသစ် တမျိုး ကိုလည်း တွေ့ ရှိ နေလေရဲ့ ။
အိမ်ပြင် ထွက်ရမှာ ကြိုက်တတ်လာတဲ့ မုန့်လေး ဟာ ၊ စကားလုံးတွေ ကို နားလည်စ ပြုလာ ပြီ ။ ကောင်းကင် သစ်ပင် မြက်ခင်း တွေ ကို ၊ လက်ညိုးလေး ထိုးပြီး စူးစမ်း တတ် လာပြီ ။ တခါတလေ သခင် နဲ့ အတူ လမ်းလျှောက် ထွက် လာ ရ လို့ ၊ စပ်စလူးခါ ပျော်နေတဲ့ ခွေး လေး တကောင်ကို ၊ တခစ်ခစ် နဲ့ သဘောကျ ချင် ကျ နေ သေး တယ်။ ယူကလစ်ပင် ကြီး တွေ ပေါ် ကို ပျံ တက် လိုက် ပျံ ဆင်းလိုက် နဲ့ တ၀ုန်းဝုန်း ဖြစ်နေကြ တဲ့ ကတ္တ၀ါ ငှက်အုပ်လိုက် ကြီးကို ၊ အေးအေး ဆေးဆေး ပဲ ကြည့် တဲ့ ကလေးလေး ဟာ ၊ အမေ လုပ်သူ ခဏလေး ပျောက်သွားရင် တော့ ၊ စိုးရိမ်တကြီး ငိုညိ တတ် နေ ပြန်တယ်။ ဟောဟိုဖက်က အဆုပ်လိုက် အခဲလိုက် ပွင့်နေတဲ့ ခရမ်းပြာ စိန်ပန်း တွေ ရဲ့ အလှ ကို ခံစား တတ် ဖို့ ဆိုတာတော့ ၊ အဝေးကြီး လို ဦး မည် ပေါ့ ။ သူ ရောက်လာတဲ့ လူ့လောက ကြီး ထဲမှာ အံ့သြစရာ တွေ ရော ၊ ပူပင် စရာ တွေ ရော ၊ ရယ်မြူး ကြည်နူးစရာတွေ ရော အများကြီး ရှိတယ် ဆိုတာ ၊တဖြည်းဖြည်း နဲ့ သိလာ ၊ ကြုံလာ ရင် လေ . .။
တခါတလေ လည်း သံသရာ ဝဋ်ဆင်းရဲ ဆိုတဲ့ ယဉ်ပါးလွန်းလှတဲ့ စကားလုံးကြီး အကြောင်း စဉ်းစား မိတဲ့ အခါ ၊ မုန့်လေး ကို ငုံ့ ကြည့် ပြီး သနားနေ မိ တတ်တယ်။ ငါတို့ဟာ ကိုယ်တိုင်တောင် သံသရာက ရုန်းမထွက်နိုင် ကြ တာ ။ အခု နောက်ထပ် သံသရာ ခရီးသည် တယောက် ကို အတင်းကို ဆွဲခေါ် လာ ခဲ့ မိ ပြီပေါ့ ။ တကယ်တော့လည်း လူတိုင်းဟာ ဒီလိုပါ ပဲ ၊ သံသရာ ဘာညာပေါ့ ။ ပြီးတော့လည်း အဖော်အပေါင်းတွေ ခေါ် ပြီး ပျော်ကြောင်းကို ရှာကြ ပြန်တာပဲလေ ။ မုန့်လေးက တော့ သံသရာ ကြော မှာ ၊ မျော ပါ လာ တာ မဟုတ်လောက် ။ သိပ္ဗံ ဓါတ်ခွဲ ခန်း ထဲက အေးခဲ နေ တဲ့ ဇီဝ အစိုင်အခဲလေး ဟာ ၊ အသေအချာ ကြီးကို ဖန်တီးခဲ့ တာ မဟုတ်လား ။ သံသရာ အဖော် အတွက် ရယ် လား ၊ ခက်ခက် ခဲခဲ ကို ပျော်ကြောင်း ရှာ ခဲ့ သည်လေ။ လူတယောက် ဖြစ်တည်လာ တာ ဟာ မတော်တဆ မဟုတ်ဘူး တဲ့ ။ ဒါပေမယ့် ၊ မတော်တဆ တွေ များလွန်းလှ တဲ့ လူ့ ရွာ ထဲ ၊ မသိကျိုးကြင် နေလို့ မရ တော့ တဲ့ တနေ့ မှာ ၊ လည်မှာ အလှဆင် ဖို့ ရတနာ တကုံး လိုပဲ ၊ ကိုယ်ပျော်ရွှင်ကျေနပ်ရ ဖို့ သားသမီး ရတနာ တယောက်တလေ ဘယ်လို နည်းနဲ့ မဆို လိုအပ် လာ ခဲ့ တယ် ။ ကိုယ့် ကို ကိုယ် တော့ တိုးတိုးလေး ကတိ ပေး မိတယ်။ ဒါဟာ အတ္တ ဆို ရင် လည်း ၊ မြင့်မြတ်တဲ့ အတ္တ ဖြစ်ရ ပါစေ့ မယ်။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မုန့်လေး ကတော့ ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း ၊ ပြုံးခြင်း မဲ့ ခြင်း ၊ ရှုံး ခြင်း နိုင်ခြင်း တွေ ရဲ့ အကြားမှာ လူးလာ ရှင်သန် ရတော့မယ့် လူသား တယောက် ဖြစ် လာ ခဲ့ ပြီ ။
ပြောရရင် မုန့်လေး ရဲ့ မိုးမိုး ဟာ ဓူဝံကြယ် မရှိတဲ့ အရပ်ကို ရောက်လာ ကတည်းက ၊ လမ်းပျောက်သလို ဖြစ်နေခဲ့ တာ။ ဘာအကြောင်း ကြောင့် ငါ ဒီအရပ်ကို ရောက်လာ ခဲ့ သလဲ လို့ တယောက်တည်း ညည်းတွား တယ် ။ ဘုရားကို မေးခွန်းတွေ ထုတ်တယ်။ စာရွက်တွေပေါ် မှာ ဟိုခြစ် ဒီခြစ် လမ်း ကြောင်းတွေ ဆွဲ ကြည့် တယ် ။ ကြီးရင့် ခြင်း ရယ် ငြီးငွေ့ ခြင်း ရယ် နဲ့ မပျော်ရွှင်ခြင်း တို့ လိမ်ယှက် ထား တဲ့ ဖွတ်မြီး တချောင်းသာ လည်တိုင်ပေါ် မှာ ရှည် လျား လာတယ် ။ ဘာဆို ဘာမှ မမြင်ရသေးဘူး ။ လမ်းမ ပေါ် ငေးမော ရင်း ၊ စိန်ပန်းပြာ ပင် တွေ အောက် မှာ၊ ကလေးလက်တွန်း လှည်း လေး နဲ့ မိခင်တယောက် ကို မြင်တိုင်း မျှော်လင့်ချက်တွေ ၊ ကြွေ ကြွေ ကျ တယ် ။ အိမ်တံခါး ကို အတူတူ သော့ ဖွင့် ၀င်လာပြီး ရင် ၊ တိတ်ဆိတ် ရှင်းလင်း နေ တဲ့ ဧည့်ခန်းမှာ ၊ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက် ဟာ ၊ စကား တွေ ပို နည်းလာ တယ်။ နံရံ ပေါ်က နာရီ က တချက်ချက် မြည် သလို ၊ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက နာရီ က လည်း တ တောက်တောက် အသံ ပေးလို့ ပေါ့ ။
တနံ တလျား က ပရဟိတ ဂေဟာ တွေမှာ မိဘ စွန့် ပစ် သွားတဲ့ ကလေး လေး တွေကို ကြည့် ပြီး ၊ ကမ္ဘာကြီးကို စောင့်ရှောက် ချင်သူ တယောက်ဟာ ၊ ကလေး တယောက် မွေးစား ရမယ့် အရေး ဒါကတော့ သိပ် မလွယ်ဘူး လို့ သက်ပျင်း ချ တယ်။ ကလေး တယောက်ကို ကိုယ်တိုင် မမွေးဖွား နိုင် လို့ ၊ ကလေးတွေ အများကြီးကို မွေးဖွားပေး နိုင်မယ့် သားဖွားဆရာမ အလုပ်ကို ပြောင်းလုပ် တယ် ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး တယောက် အကြောင်း ၊ အဝေး မှာ နေတဲ့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း တယောက်က ပြောပြ လာတော့ မမြင်ဘူးတဲ့ အမျိုးသမီး ကို အံ့သြ ချီးကျုး မိ ရ တယ်။ သူငယ်ချင်း ကိုယ်တိုင်က တော့၊ သားဖွားဆရာမ အလုပ်ကို ပြောင်းလုပ်မယ့် သူမျိုး မဟုတ် ။ အပူအပင် ကင်း ပြီး ၊ သံသရာ အချုပ် အနှောင် ကင်းတဲ့ ဘ၀ ကို ၊ ကျေနပ်စွာ လက်ခံ ထား ပြီးသား ။ သူ နဲ့ က မိန်းမ ခြင်း အတွင်းကျကျ စိတ်ခံစားချက် တွေကို တီးတိုး ရင်ဖွင့် နေကျ ။ နင် က peer pressure မခံ နိုင်တဲ့ မိန်းမ မျိုးမှ မဟုတ်တာ လို့ ၊ သူ က ပြောတော့ ၊ ကိုယ့်ကို ကိုယ် မလုံချင် ။ မိန်းမ တယောက်ဟာ သူ့ လိင် သဘာဝ အရ ၊ အချိန်တန်ရင် သားသမီး လိုချင် တာပဲ ၊ အဲ့ဒီ အချိန်ကို ကျော်သွား ရင် လည်း သူ့ဟာ သူ နေတတ် သွား တာပါပဲ ၊ လို့ သူက ဖြောင်းဖြ သည်။
တည မှာ ၊ ပုံပြင်လေး တပုဒ် ကို ဖတ်မိ လိုက်တယ် ။ မီးတွေ ၀ိုင်းနေတဲ့ အိမ် ထဲ မှာ ပိတ်မိ နေတဲ့ လူတယောက်ဟာ ၊ ကြောက်ရွံ့ တုန်လှုပ်စွာ နဲ့ ဘုရား ကျနော့်ကို ကယ်ပါ လို့ မျက်စိ မှိတ်ပြီး ဆုတောင်း နေရှာ သတဲ့ ။ မီးသတ် သမား က ၊ ပြတင်းပေါက်ကနေ သူ့ကို လှမ်းခေါ် ပေမယ့် ၊ ဘုရားကို ပဲ ဆက်ပြီး ဆုတောင်း နေသတဲ့ ။ ဒီလို နဲ့ သူ ကောင်းကင်ဘုံ ကို ရောက်သွားတော့ ၊ ဘုရားကို တွေ့ တဲ့ အခါ ၊ သူ့ကို ဘာကြောင့် လာမကယ် တာ လဲ လို့ စိတ်မကောင်းစွာ နဲ့ မေး တော့ တယ်။ လူတွေဟာ ဘုရား ဆိုတာကို ဘယ်လို ရုပ်ဒြပ် နဲ့ မျှော်လင့် ထား ကြ သလဲ ။ ဘုရားရဲ့ သတင်း စကား ဟာ ဘယ်လို တိပ တဲ့ ဘာသာ စကား နဲ့ ဖော်ပြ လာ လိမ့် မယ်လို့ စောင့်စား နေ မိ ကြ သလဲ ။
အဲ့ဒီ ည မှာပဲ ကောင်းကင်ပေါ်က ကျ လာတဲ့ မုန့်လေး အကြောင်းကို လည်း သိ ခဲ့ ရ တယ်။
သာမန် မိခင် တယောက်လို မုန့်လေး ကို ရင်ခွင်ထဲ မှာ ပိုက်ထွေး ထားရင်း ကပဲ ၊ အံ့သြတကြီး ငုံ့ ကြည့် မိတဲ့ အခါတိုင်း သူဘယ်ကနေ ဘယ်လို ရောက်လာတာလဲ လို့ စိတ်ထဲကနေ မြည်တမ်း မိတယ်။ တကယ်ပဲ သူလေး ဟာ မန္နမုန့် လို ၊ ကောင်းကင် ပေါ်က သူ့အတိုင်း ကျ လာ ခဲ့လေ သ လား ။
အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ ဘယ်တုန်းကမှ အနုပညာ မဆန် တဲ့ မုန့်လေး ရဲ့ ပါ့ပါ က ၊ မန္န ဆိုတဲ့ ၊ နာမယ် လှလှ လေးကို ရွေး ခဲ့ တယ်။ ဇာတ်စုံ ကို လည်း ခင်း ပြ ရ သေးတယ် ။ အီဂျစ်ပြည် မှာ ကျွန်ခံ နေကြ ရတဲ့ ဣသရေလ လူမျိုး တွေ ဟာ ၊ဘုရားသခင် ကတိတော် ထားတဲ့ ပျားရည် နဲ့ နို့ စီးဆင်း နေတဲ့ နိုင်ငံ သစ် ဆီကို ထွက်ပြေး ကြတယ် ။ တောထဲမှာ လမ်းပျောက် အစာ ရေစာ ငတ်ပြတ်ကြတဲ့ အခါ ၊ ဘုရားသခင် ကို အပြစ်တင် ငြီးတွား ကြ တယ် ပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ ကောင်းကင်ပေါ်က နေပြီး ၊ မနက်ခင်း တိုင်း အံ့သြဘွယ်ရာ မန္န မုန့် တွေ ချ ပေးသနား ခဲ့ တယ် လို့ အဆို ရှိတယ်။
မန္န ရဲ့ ဇာတ်ကြောင်း က ဒီလောက် နဲ့ တင် ပြီးမသွားသေးဘူး ။ တရက် မှာ အိမ်ကို တရားဟော ဆရာ တယောက် ရောက်လာတယ် ။ မန္န ကို မြင်ဖူး လား လို့ သူ တရားဟောနေကြ လေသံ အတိုင်း စ ပြီး မေးတယ်။ မန္န ဆိုတဲ့ မုန့်လေးကို ရင်ခွင်ထဲ ချီ ထား ရင်းက ၊ ဟင့်အင်း မမြင်ဖူးဘူး ပေါ့ ။ တရားဟော ဆရာက ကျမ်းစာအုပ်ကို တရွက်ခြင်း လှန် ရင်း ၊ တနေရာ မှာ ရပ် လိုက်တယ်။
“ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ထိုစားစရာကို မန္နဟု ခေါ်ဝေါ်ကြ၏။ နံနံစေ့ကဲ့သို့ဖြစ်၍ ဖြူသောအဆင်းရှိ၏။ ပျားရည်နှင့်ရောသော မုန့်ကြွပ်နှင့် အရသာတူ၏ ”
ရင်ခွင် ထဲက မုန့်လေးကို ငုံ့ ကြည့်ရင်း ရွှင်ရွှင် မြူးမြူး ပြုံး မိတယ်။ ဟုတ်တယ် အရသာ ရှိ တဲ့ မုန့်လေး ပေပဲ ။ တရားဟော ဆရာက ဆက်ပြောတယ် ။ နံနံစေ့ ဆိုတာ တကယ့် သေးသေးလေး ဒါပေမယ့် ဒီ လူအုပ်စု ကြီးကို အနှစ် လေးဆယ် လုံးလုံး တောထဲ မှာ အာဟာရ ဆက်ပေး ခဲ့ တဲ့ အဓိက အစားအစာ ။ ပြီးတော့ ၊ မနက်တိုင်း ကောက်သိမ်း တဲ့ အခါ တရက်စာ ပဲ ယူရတယ် ။ လောဘ နဲ့ ပို ပြီး သိမ်းဆည်း မိ ရင် ပိုးထိုး သွား တတ်တယ် ။ အဲ့ဒါကြောင့် နှိမ့်ချခြင်း ၊ ရောင့်ရဲခြင်း ၊ ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ဒြပ် တွေ ပါ တဲ့ အမည် ပဲ လို့ ဆိုတယ်။
မိုးမိုးကတော့ မုန့်လေး ကြီးလာရင် ၊ တကယ်ပဲ စာနာ နှိမ့်ချ တတ်သူ ဖြစ် နိုင်ပါ့ မလား ၊ ကျေနပ် ရောင့်ရဲ နိုင်သူ ရော ဖြစ် ပါ့ မလား ဆို ပြီး အများကြီး ကြိုတင် မပူပန် မိသလို နိမိတ် လည်း မဆောင် ချင် ဘူး ။ အနိမ့်ဆုံး တော့ ၊ လောက ကြီး ထဲကို ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ ရောက် လာ ပြီး ၊ ကိုယ့် နဲ့ စပ်ဆိုင်သူ တိုင်း ကို ကြည်နူးပျော်ရွှင်စေ တဲ့ သူလေး ဖြစ် လာရင် တော်ပါ ပြီလေ ။
လောကကြီး နဲ့ ချီ တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကြီးတွေ ခဏနေပါ ဦးတော့ ။ ကနေ့ နဲ့ မနက်ဖြန် မှာ ၊ စိန်ပန်းပြာ တွေ က ၊ ဝေ ပြီးရင်း ဝေ နေ ရော ။ လေပြေ တွေက လတ်ဆက် လွန်းတယ် ။ နေမင်းကြီးက ပြုံး ပြီး ၊ ကောင်းကင် ကြီးက ပြာ လို့ ။ အဆင်မပြေ မူ တွေကို ကျော်လွှား ပြီး တဲ့ အခါ ၊ လောကကြီးမှာ ကျေနပ် စရာ တွေ လည်း ရှိတယ် ဆိုတာ ကို မုန့်လေးက သက်သေ ဖွင့်ဆို ပေး ခဲ့ ပြီ ။ လိုချင်တာတွေရ တော့ ကျေနပ် တာပေါ့ ၊ ဖြစ်ချင် သလို တွေ ဖြစ်မလာရင် စိတ်ပျက် လိုက်ပေါ့ လို့ သဘာဝ ဓမ္မ ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း လက်ခံ တတ်တဲ့ အဝေးက ချစ်သူငယ်ချင်း ရဲ့ ကွန်ဂရက် ကျုလေးရှင်း မက်ဆေ့ခ်ျ လေး ကို တော့ ၊ အားတုံ့ အားနာ ဖြစ်နေ မိ ခဲ့တယ် ။
တကယ်ဆို စောင့်စားသင့် တဲ့ အချိန်တခု ဟာ လုံလောက် ပြီမို့ ၊ ဘ၀ ရဲ့ ဦးတည်ရာ ကို လမ်းကြောင်း ပြောင်း ဖို့ ၊ ဆုံး ဖြတ် ပြီးတဲ့ အချိန် ကျမှ ၊ မုန့်လေး ရောက် လာ ခဲ့တာ ။ ဒါဟာ ၀မ်းသာစရာ ဆိုတာထက် အများကြီး ပို ခဲ့တယ် ။ အနီး အပါးက မိတ်ဆွေ တယောက်က ဆိုရင် ကာယကံ ရှင်ထက် တောင် ပို အံ့သြနေဟန် နဲ့ ကိုယ့် အသား ကို ကိုယ်ပြန် ဆိတ် ဆွဲ မ ကြည့်ဘူးလား တဲ့ လေ။ နောက် တယောက်က လည်း ၊ ကဲ - မိခင် ဖြစ်ရတာ ဘယ်လို နေလဲ လို့ မချို မချဉ် မေး လာ တယ် ။ ဒီ မြို့ကို ရောက်ကတည်းက အစစ အရာရာ ကူညီ နေကြ မိခင်လို စောင့်ရှောက်တဲ့ အမျိုးသမီးကြီး ကတော့ ခု အချိန် မှာ ပျော် ထား စမ်း ဟေ့ လို့ ခပ်ကျယ်ကျယ် ရယ်မောရင်း ဆိုတယ် ။ အမြော်အမြင် ရှိ တဲ့ သူ့စကားက ရိုးရိုးလေး နဲ့ အဓိပ္ဗါယ်တွေ ပါနေတယ် ။ ဟုတ် မယ်လေ ။ ရင်ခွင် ထဲက မုန့်လေး ဟာ အမြဲတမ်း ရင်ခွင် ထဲ မှာ ရှိနေမှာ မဟုတ် သလို ၊ ကောင်းကင်ကြီး ကလည်း အမြဲ ပြာနေသည် မှ မဟုတ်ပဲ ။ တကိုယ်စာ အပူအပင် တွေက တဘ၀ စာ ကြို စောင့်နေ နှင့် ပြီ ရော။
အပူအပင် မရှာလို တော့ တဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်း ဆီ ကိုတော့ ၊ ကျေးဇူးတင် ကြောင်း စာပြန် လိုက် တယ်။ သူငယ်ချင်း ရေ ၊ ပန်းတိုင် ဆိုတာ တကယ် မရှိ တဲ့ အသက်တာ မှာ ၊ လက်ခံ ရရှိ တဲ့ နေ့ရက် တိုင်း ဟာ ၊ ဆု တွေ ချည်းပဲ ။ ။ မမှီ လိုက်တဲ့ ရထား ရှိပေမယ့် ၊ မရောက် လာ တဲ့ လက်ဆောင် ဆိုတာ မရှိ ပါဘူး ။ အရာရာတိုင်း မှာ အကြောင်းပြချက် ရှိတယ် လို့ ပြောကြတယ် မဟုတ်လား ။ ဘယ်သူ့ အတွက်မဆို ၊ ကောင်းကင်ကြီးက တနည်းတဖုံ တော့ ပြာလွင် ပေး နေတာပါ ပဲ ကွာ ။
တကယ်ဆို မုန့်လေး ရဲ့ မိုး နဲ့ ပါ့ ဟာ မှန်ရှေ့မှာ ရပ်ပြီး သက်ပြင်း တွေ ကိုယ်စီ ချ နေ မိ ကြတာ ဘယ်သူ သိပါ့ မတုန်း။ မီးခိုးရောင် ဆံပင် တချို့ကို တနည်းနည်း နဲ့ ဖုံးကွယ် ထား လို့ ရပေမယ့် ၊ ဖုံးကွယ်ထား လို့ မရ တဲ့ အရိပ် အငွေ့ တချို့ က ၊ အရှိတရား အတိုင်း လေ။ တခါတလေ လည်း အရှိတရားထက် ပိုပြီး ဆင်ဆင်ပြင်ပြင် လုပ်ရင်း ၊ မဆိုးလှသေးပါဘူး လို့ အားတင်း ရ တာပေါ့ ။ အခုအချိန် တော့ မိုးမိုး ရဲ့ နားဆွဲ အကြီး ကြီး တွေကို သဘောကျ တာက လွဲ လို့ ၊ မုန့်လေး က ဘာ မြင်တတ် အုံးမလဲ ။ တချိန် ကျောင်းတက် ရ တဲ့ အရွယ် ရောက်ရင် ကျောင်းက သူငယ်ချင်း တွေ ရဲ့ မိဘ တွေ နဲ့ ၊ နှိုင်းယှဉ် တာ မျိုးတွေ ဖြစ်ချင် ဖြစ် လာမယ် ။ အဲဒီ အခါ ကျရင် ၊ မိုး တို့ ပါ့ တို့ဟာ မုန့်လေး ကို အကြာကြီး စောင့်ခဲ့ ရတဲ့ အကြောင်း ၊ ရှင်းပြရမယ်။ သိတတ် လာတဲ့ အရွယ်ရောက်ရင် တော့ ၊ မုန့်လေး ဟာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် ထက် ပို တဲ့ လူကလေး ဖြစ်ကြောင်း နားလည် အောင် ပြောပြရ မှာပေါ့ ။
ဗိုက်ထဲက ထွက်လာကာစ ပိစိကွေး လေး တုန်းက ဘယ်သူ နဲ့ တူမှန်းမသိ ဘယ်လိုချစ်ရ မှန်းမသိ ။ ခုတော့ ပေါင်ပေါ် ကို ကုတ်ခြစ် ဖက်တွယ် တက်ပြီး ၊ သွားလေး နှစ်ချောင်း ပေါ်အောင် တခစ်ခစ် ရီ ပြ နေ တဲ့ ၊ ကလေးလေး ဟာ ၊ စိန်ပန်းပြာတွေ နဲ့ အတူ တနှစ် ပြည့် ပြီ ။ ဒီ ကလေးလေး အသက် နှစ်ဆယ် ဆိုရင် - ငါတို့ အသက် ဘယ်လောက် ရှိမလဲ ဆိုတဲ့ ရိုးဆင်းလှ တဲ့ သချာင်္ က၊ အခက်ခဲဆုံး စိတ်တွက် ပုစ္ဆာ ။ ငါတို့ ကျန်းမာအောင် နေရ မယ် - လို့ သာ တယောက်တပြန် အားပေးရင်း ကြောင့်ကြမူ တွေ ကို လျှော့ချ ကြတယ်။
မောင်နှမ သားချင်း မရှိ ပဲ တယောက်တည်း ကြီးပြင်းလာ မယ့် ၊ ခလေး ဟာ ၊ သူ့ ဘေးမှာ ရှိနေမယ့် နှစ်ဦးတည်း သော မိဘ တွေကို ဘယ်လို ပုံစံ နဲ့ ရှိစေချင် မလဲ ။ ကိုယ်တွေကသာ သားသမီး ကို ဟိုလို ဒီလို ဖြစ်စေ ချင်ကြတာ ။ သူတို့ ဖက်က မှာလည်း သူတို့ ဖြစ်စေချင်တာ တွေ ရှိပေ မပေါ့ ။ ငယ်တုန်း က ဆို ၊ အတူမနေ ကြ တဲ့ မိဘ နှစ်ယောက်ကို ကြည့်ြ ပီး ၊ ငါ တို့ဟာ ကြားထဲက သက်သက် ဒုက္ခလာခံ ရတယ် လို့ ၊ မလိမ်မိုး မလိမ္မာ တွေး မိ ခဲ့ တယ်။ ဖြစ်ကို ဖြစ်ရမယ် လို့ ရည်မှန်းချက်တွေ နဲ့ ရဲရင့် ခဲ့တဲ့ လူငယ် ဘ၀ ကို ကျော်လွန်လာ ခဲ့ ပြီး လို့ ၊ မဖြစ်နိုင်တာတွေ မဖြစ်သင့်တာတွေ အကြောင်း တွေးတော တွေဝေ မူ တွေနဲ့ ရောင့်ရဲလွယ် တဲ့ အရွယ် ကို ရောက်လာ တော့ မှ ၊ စာနာ စရာ တွေကို စာနာ တတ် လာ ခဲ့ တယ်။ အဲဒီ အရွယ်ကျမှ ဘ၀ ကို အသစ်ပြန်စ ရ မယ် ဆိုလည်း စ ကြတာပေါ့ မုန့်လေးရာ ။
လက်ကိုင်ဖုန်း နဲ့ တက်ဗလက် တွေကို ကစားစရာ လုပ် တဲ့ မျိုးဆက် က ၊ ရောင်းသူမဲ့ ဆိုင်မှာ ဈေးဝယ် ပြီး ၊ မောင်းသူမဲ့ ကား ကို စီးကြ တဲ့ အချိန်မှာ ၊ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ တွေ မဲ့ မသွား ဖို့ ပဲ အရေးကြီးတာ မဟုတ်လား။
ပြောကြတယ် ။ သား သမီး ရှိလာပြီ ဆိုရင် ဘ၀ ရဲ့ တ၀က်လောက်ကို ပေးလိုက် ရတယ် တဲ့ ။ ခု ကို ပဲ ဘ၀ က တ၀က်ကျိုး ချင် နေပြီ ဆိုတော့ ၊ ရှိတာတွေ အကုန်ပဲ ပေး ရ တော့မှာ ပေါ့ ။ မနက် မိုးလင်း ယုံ ရှိသေး အိပ်ရေးဝ ပြီး လန်းဆတ် နေတဲ့ မုန့်ကလေး ကို ၊ အိပ်ချင်မူးတူး နဲ့ ချီရင်း ၊ open up the blind, here is the sun လို့ ကဗျာလေး ဆို ပြ ပြီး ၊ ယင်းလိပ်တွေ ဖွင့် လိုက် တာနဲ့ ၊ အဲဒီနေ့ ဟာ ကိုယ့်အတွက် ဘာမှ မကျန် တော့ ဘူး ။ မနက်စာကျွေးတယ် ။ ကဗျာ တွေ ဆိုပြ သီချင်းတွေ ဖွင့်ပြတယ်။ ဆော့ပေးတယ် ။ နေ့လည်စာကျွေးတယ် ။ တရေးသိပ်တယ်။ အပြင် ထွက် လမ်းလျှောက် ပေးတယ်။ ညစာကျွေးတယ်။ စာအုပ်ဖတ်ပြတယ် ။ ညအိပ်ကာနီး ရေချိုးပေးတယ်။ close the blind လို့ ဆိုထားတဲ့ ကဗျာ မရှိပေမယ့် ၊ ညနေစောင်းလို့ ယင်းလိပ် တွေ ပိတ် တဲ့ အချိန်တိုင်း မှာ ၊ မြန်ဆန်လွန်း တဲ့ တနေ့တာ ကို သတိ ထား မိ တယ်။ မုန့်လေး ညအိပ် သွား တော့ ၊ ကိုယ်ပိုင် အချိန်တိုတိုလေး ထဲ ကမှ ၊ အချိန်လုပြီး မန္န အကြောင်း လည်း စာ က ရေး ချင်သေး တာ။
စာအုပ် ဖတ်ဖို့ ဆိုတာ တော့ ဝေလာ ဝေး ။ ကြည့်နေကျ သတင်းတွေ ၊ ရုပ်ရှင် တွေ လည်း မကြည့် ရ တဲ့ အတူတူ ၊ တီဗွီရှေ့ မှာ အတူ ထိုင်ပြီး ၊ Thomas and his friends ကိုပဲ စီးရီးစ် လုပ်ပြီး ထိုင်ကြည့် နေရတယ် လေ ။ ဒါပေမယ့် ဒီကောင်ကလေး တကယ် ကြိုက်တာက ၊ အတီးအမှုတ် နဲ့ သီချင်းသံ တွေ ။ ဂီတ သံ တခုခု ကို ကြားတာနဲ့ လူက တလှုပ် လှုပ် ဖြစ်နေပြီ ။အရုပ်တရုပ် ကို ၅ မိနစ် ထက် ပိုပြီး စိတ်မ၀င်စား တဲ့ မုန့်လေး ဟာ ဂစ်တာ ကို ပထမဆုံး စ ပြီး တွေ့ တဲ့ အချိန်မှာ ၊ သူ့ ပါ့ပါ တီး ပြတာ ရပ်လိုက်တဲ့ အထိ ၊ ဒူးလေး နှစ်ချောင်း ထောက်ပြီး မြောက်ဆွ မြောက်ဆွ လုပ် လို့ မ၀ နိုင် ရှာ ဘူး ။ သူ့ ပါ့ က ဂျီမီဟန်းဒရစ်ဇ် ၀င်စားတာ လို့ နောက် ရင် ၊ မိုးမိုးကလည်း စန္ဒယား လှထွတ် လောက်တော့ ၀င်စား စေ ချင်တာပေါ့ ။ မုန့်လေးရေ ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ကိုယ်တွေ မဖြစ်မြောက်ခဲ့ ၊ ဖြစ်မြောက်ခွင့် မရ ခဲ့တာတွေ ကို ၊ ပြန်ပြီး စိတ်ကူးယဉ် ခွင့် ပေး လို့ ကျေးဇူးပါ ကွယ်။
မုန့်ကလေး ဟာ တနှစ်ပြည့် သွားတာနဲ့ ၊ ချက်ခြင်း ပြောင်းလဲ လာ တယ် ။ ကလေးလေး မဟုတ်တော့ ပဲ ၊ ကောင်ကလေး ဖြစ် ချင် လာ ပြီ ။ မကိုင်ရဘူး လို့ ပြောထားတဲ့ ဟာ ကို ၊ လစ် တဲ့ အချိန် မှာ သွား ကိုင်ကြည့် ဖို့ လူလည် ကျ တတ်နေပြီ ။ သူ့ကို မကြည့်ပဲ တခြား တခုခု လုပ်နေရင် ၊ ခေါင်းကို နံရံ နဲ့ ဆောင့်ပြီး ၊ ယူ ချီ အောင် မူယာ မာယာ တွေ လုပ်တတ် ပြီ။ အကျီ င်္ ၀တ်ပေးလို့ ပြီးကာနီး မှ ခြေထောက် တချောင်းကို ပြန်ဆွဲထုတ် ပြီး တခိခိ နဲ့ လူနောက် ကလေး လုပ် နေပြီ ။ လမ်းလျှောက် ထွက် ဖို့ ၊ တွန်းလှည်း ပေါ် ကို တောင် ၊ သိပ် ပြီး မတက် ချင် တော့ဘူး ။ ကြည့် ဦးလေ ။ တွန်းလှည်း နဲ့ ကိုယ်လုံး နဲ့ အပြည့်လောက် ဖြစ် လို့ ၊ ခြေထောက် တွေက အပြင်ကို တောင် ထွက် နေပြီ ။ မကြာခင် မှာ သူ့ခြေထောက်ပေါ် သူ ရပ်ပြီး လမ်း စ လျှောက် တော့ မည် ။ မိုးမိုး လည်း ကလေး တွန်းလှည်း လေး နဲ့ လမ်းလျှောက်ထွက် ခြင်း အမူ ကို ရပ် ရ တော့မည် ။ တခြား အမူ ဆောင်တာ အသစ်တွေကို လိုက်ပြီး ဖြည့်ဆည်း ရ အုံးမည်ပေါ့ ။ နောက်တနှစ်ဆို ကစားကွင်းထဲ လိုက်ပြီး ပြေး ခုန် ပေါက် ပေး ရမည်။ နောက် သုံး လေး နှစ် လောက်ဆို ၊ ကျောင်းလိုက်ပို့ ရမည်။ နောက် ဆယ် နှစ် ဆယ့်ငါးနှစ် ဆို ကျောင်းစာတွေ အတွက် ပူပန်ပေး ရမည်။ တက္ကသိုလ်တွေ တက်ဖို့ ဖန်တီး ပေး ရ မည် ။ မဆုံး နိုင်သော တာဝန် ၀တ္တရား များ နဲ့ တကယ့် ဘ၀ ထဲ မှာ သူ့ ခြေထောက် ပေါ် သူ မတ်တပ်ရပ် နိုင် တဲ့ အချိန် တွေ ထိ ၊ ကြိုတင် တွေးတော နေ ရ ပြန်တယ်။
လောလောဆယ်ဆယ် မှာတော့ ၊လေတဖြူးဖြူး အောက်မှာ လမ်းတပတ် ပတ် ပြီး တဲ့ ၊ မုန့် ကလေး ဟာ ၊ ယူကလစ် ပင်ကြီးတွေ အောက် က ငှက် တွေ ကိုလည်း မကြည့် နိုင်တော့ဘူး ။ အိမ်ရှေ့ ကစားကွင်း ထဲမှာ ပြေးလွှား ခုန်ပေါက် နေတဲ့ ကလေး တွေ ကို လည်း ၊ အားမကျ နိုင်ရှာ တော့ဘူး ။ နေလုံး နီနီ ညနေ စောင်း လို့ အမေ့ကျောင်း ကို မရောက်ခင် မှာ ကို မျက်တောင် တွေ ညောင်း လေ ပြီ ။
ဒီနိုင်ငံ မှာ မွေးတဲ့ ကလေး မို့ ဒီက အများသုံး အင်္ဂလိပ် စကား နဲ့ ၊ မိဘ တွေ အိမ်မှာ ပြောတဲ့ ဘာသာ စကား ကြားမှာ ရှုပ်ထွေး နေမှာ ကို စိုးရိမ် မိ ခဲ့ ပေမယ့် ၊ ပုံမှန် စစ်ဆေး ရတဲ့ ကျန်းမာရေး ဌါန က ဆရာမ တွေ က ၊ ကလေး ငယ် တွေရဲ့ ဦးဏှောက်မှာ ဘာသာစကား နှစ်မျိုး လောက် ကို တချိန်တည်း လက်ခံ မှတ်သား နိုင်တယ် လို့် ဆိုတာ ကြောင့် ၊ တော်ပါသေး သည်။ ဒီတော့ လည်း မုန့်လေး ရဲ့ အိပ်ယာဝင် သီချင်းတွေဟာ မိုးမိုး ကြိုက်တဲ့ ဗမာ သီချင်း တွေ လည်း ဖြစ်နေ တတ် သည် ။ အရေးကြီးတာ မုန့်လေး နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျ သွားဖို့ ပဲ လေ ။ သွပ်ပြားပေါ် မိုးစက်ကျသံ တပေါက် ပေါက် အောက်မှာ ၊၀ါဆို ၀ါခေါင် ရေတွေ ကြီးတော့ ၊ သပြေသီးမှည့် ကောက်စို့ ကွယ် .. လို့ အမေ တလှည့် အဖွား တလှည့် အဒေါ်တွေ တလှည့် ချော့သိပ် ခံ ခဲ့ ရတဲ့ ငယ်ဘ၀ တွေ လို တော့ ဘယ် ဟုတ် ပါ့ မလဲ ။ မုန့်လေး ရဲ့ ငယ်ဘ၀ လေး ဟာ ခုချိန်မှာ အေးချမ်း တိတ်ဆိတ် စွာပဲ ဆွေမျိုး သားခြင်း တွေ ရဲ့ မေတ္တာငွေ့ နဲ့ ဝေး ကွာ လှ တယ်။
တခါတလေ တော့ လည်း ၊ မိုးမိုး တို့ ဟာ ၊ ခရာဆူးခြုံ တွေ ရှိ တဲ့ အရပ်ကို ပြန် ချင် တယ်။ အဲ့ဒီ အရပ်မှာ ချစ်တဲ့သူ တွေ နေ ကြ တာ ဆိုတော့ ၊ မျှော့ နက် မည်း ကြီးတွေ တွယ်ချင် လည်း တွယ် ပါစေ ၊ သပြေသီး မှည့် တချို့ တလေ ရရင်ကို ပျော်နေမှာပဲ လေ။ အခုတော့ ခရမ်းပြာ စိန်ပန်း တွေ ကြားထဲ မှာ ပန်းနုရောင် ကတ္တဝါ ငှက်ကြီး တွေ ရဲ့ အသံ ကို နားယဉ် ငေးမော နေရင်း ၊ ဘယ်တုန်းက ဘယ်ကွေ့ ကို ကျော် ခဲ့ မှန်း မသိ ပဲ ၊ ဘ၀ ခရီး ရဲ့ တနေရာ မှာ ရောက်နေ ခဲ့ တယ် ။ ချောင်းရိုး တလျှောက် လှေကို လှော် လာ လိုက်တာ လေ ။ အခုဆို ၊ ဟောဒီ လက်တွန်းလှည်း လေး ထဲ မှာ ၊ မျက်တောင် ညောင်း နေတဲ့ ကလေးလေး တယောက် တောင် ရှိ နေ ခဲ့ ပြီ ။ အဲ့ဒီ ကလေး လေး ကရော ၊ ဘယ် သားချော့ တေး ကို လွမ်းဆွတ် လို့ ၊ ဘယ်အရပ် ဒေသ ကို ခင်တွယ်မှာ လဲ ။ ဘယ် ဆီ ဘယ်ဝယ် လှေ လှော် ထွက်လေ မလဲ ။ ချောင်းရိုးထဲ မှာ ပဲ လား ။ မြစ်ကွေ့ မြစ်ကောက် ဆီ ဆန် တက်လေ မလား ။ တကယ်တော့ လည်း ဘဝ ဟာ အိပ်မက် တခု ပါပဲ ။
မရိုး နိုင်တဲ့ ကလေးချော့ ကဗျာ လေး ကို ဆို ညည်း မိ တယ်။
row ... row ... row your boat, gently down the stream, merrily ... merrily ... merrily ... merrily , life is butadream
အိပ်ပြီလား မုန့် လေး ရေ ၊ မိုးမိုး တို့ ချောင်းရိုး တလျှောက် ဆက် လှော်ကြ ဦးမယ် လေ။ ပျော်ပျော်ကြီးသာ လှော် ကြ မယ် နော် ။
Labels: Family , personal , Printed
ဖတ်​လို့​ကောင်းလိုက်​တာ မ​ကေရယ်​ စမ်း​ချောင်း​လေး ရင်​ထဲစီးဆင်းသွားသလို တငြိမ့်​ငြိမ့်​နဲ့
ရှားရှားပါးပါးပြန်ဖတ်ရတယ်။ ကျေးဇူးပါ။ တိုက်ဆိုင်မှုလည်းရှိတော့ အစအဆုံး တထိုင်တည်းဖတ်ဖြစ်တယ်။ မုန့်လေး မိုးမိုး နဲ့ ပါ့ပါ တို့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ နေ့ရက်များစွာ အတူဖြတ်သန်းကြရပါစေ။
​ချစ်​ခြင်း​မေတ္တာ​တွေနဲ့ပြည့်​​နေတဲ့ စာစုလှလှ​လေးကို လာဖတ်​သွားပါတ်​ယ မ​ကေ​ရေ။
ဖုန်းနဲ့ဖတ်မရလို့ ၊ ကွန်ပျူတာနဲ့မှ သေချာဖတ်ပြီး ခံစားလိုက်မိတယ်။ မုန့်လေး ပျော်ရွှင်ပါစေ။ လွတ်လပ်စွာ ပေါ့။
ကိုယ့်ကမ္ဘာကြီးတခုလုံးကို သူတို့ပေးထားတဲ့အခါ အင်မတန်ကြည်ဖြူစွာနဲ့ပါပဲ ကေရယ်။